Aprimo iyo ADAM: Maareynta Hantida Dijital ah ee Safarka Macaamiisha | Martech Zone
- Aprimo, madal howlaha suuqgeynta, ayaa ku dhawaaqay ku darista ADAM Digital Hantida Management softiweer si ay u bixiso daruurteeda. Madal loo aqoonsaday inuu yahay hogaamiye Mawjadaha 'Forrester Wave': Maareynta Hantida ee Dijital ah ee Khibradda Macaamilka, Q3 2016, iyadoo la siinayo waxyaabaha soo socda:
Is-dhexgalka nidaamka deegaanka ee aan xaddidneyn iyada oo loo marayo Qaab-dhismeedka Is-dhexgalka Aprimo - Calaamaduhu waxay heli karaan aragti wanaagsan oo si aan kala go 'lahayn ugu xirmaan nidaamka deegaanka ee suuq geynta iyadoo laga helayo faa iidooyinka dheeraadka ah ee isku xirnaanta furan iyo dabacsan ee Aprimo daruuraha.
Isku-duwidda Maareynta Kheyraadka Suuqgeynta (MRM) iyo DAM - Marka la isku daro Maareynta Hantida Aprimo Digital Asset iyo qeybta hoggaamineysa Arimo Suuqgeynta Wax soosaarka, suuqleyda ayaa hadda helaya xalka labada daruur ee ku saleysan daruuriga, taasoo awood u siineysa maaraynta habsami u socodka shaqada iyo iskaashiga.
Helitaanka degdegga ah ee casriyeynta casriyeynta - Macaamiilku waxay marin u helaan marin-u-habeyntii ugu dambeysay oo ay la socdaan shaqooyin cusub oo si toos ah u sii deynaya isla markaana waqti ku habboon ku soo bandhigaya.
Waqti deg deg ah oo lagu qiimeeyo iyada oo aan wax carqalad ah lagu samayn ganacsiga - Suuqleyda ayaa kor u kici kara isla markaana la socon kara Aprimo toddobaadyo yar gudahood. Waxaa intaa sii dheer waxay arki karaan faa'iidooyinka maalgashigooda daruuriga ah iyagoo adeegsanaya hab dhaqaaleedka dhaq dhaqaaqa waqti-ku-qiimeynta ee Aprimo taasoo gaabinaysa waqtiga suuqa - bilo ilaa toddobaadyo.
Amniga heer caalami ah, isku halaynta, iyo isugeyn ee ay taageerto Microsoft Azure - Kaabayaasha daruuriga ah ee Aprimo waa ujeedo laga dhisay dhulka hoostiisa, iyadoo la siinayo 24/7 ilaalin heer caalami ah oo heer sare ah, waxqabad, iyo kalsooni leh faa'iidooyinka dheeraadka ah ee daruurta, oo ay taageerto Microsoft Azure.
Falanqeeyaha Forrester Nick Barber ayaa sidoo kale faallo ka bixiyay sida suuqleyda ay uga heli doonaan qiimo ka soo iibsiga Aprimo dhowaan ee ADAM Software maqaalkiisa cinwaankiisu yahay. Helitaanka Aprimo ee ADAM Software Signals Suuqa Isugeynta Suuqa, sheegaya:
Faa'iidada cad ee isku-dhafkan ayaa ah in hadda suuqyayaashu ay hal xal ku heli doonaan dhammaan meertada nolosha.
Hadda, markay u gudubto daruurta, ADAM xooggeeda ku jira DAM (Maareynta Hantida Dijital ah) waxaa lagu guursaday faa'iidooyinka daruurta, iyadoo la siinayo suuqgeeyayaasha heer macquul ah, habeyn, iyo waxqabad.
Waxaan ku jirnaa da'da macaamiisha. Ururada maanta waxay ku tartamaan khibrada macaamiisha ee ay bixin karaan. Si kastaba ha noqotee, suuqleydu waxay ku qulqulayaan badaha mawduucyada isku dayaya inay ku soo gudbiyaan khibrada saxda ah ee marinnada saxda ah. Saamiyada ayaa u sarreeya suuqleyda. Laakiin Aprimo, waxay hadda leeyihiin hal xal oo daruur ku saleysan oo lagu maareeyo dhammaan meertada nololeed, oo lagu daro awoodda si aan kala sooc lahayn u miisaammi karo una rogrogmi karto adduunka maanta ugu horreeya ee dhijitaalka ah. John Stammen, agaasimaha guud ee Aprimo
Sidoo kale waxaa lagu soo daray bixinta cusub ee SaaS waa Maareynta Maaraynta Wax soo saarka ee Aprimo. Si buuxda loogu dhexgeliyey Aprimo DAM, Aprimo waxay u oggolaaneysaa ururada caalamiga ah inay maareeyaan macluumaadka badeecadooda iyo waxyaabaha ay ku suuqgeynayaan hal meel si loo dardar geliyo soosaarka wax soo saarka, loo dardargeliyo abuurista waxyaabaha, loona abaabulo waaya-aragnimo wax soo saar leh oo daruur ku ah daruuraha.
Magacyada shirkaduhu waxay ku fidsan yihiin warshadaha guud ahaan daryeelka caafimaadka, qaab nololeedka macaamiisha, iyo iftiiminta, oo ay ku jiraan ururada sida Phillips, ASOS iyo Home Depot, waxay horey u doorteen Maareynta Hantida Dijital ah ee Aprimo.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Hantida Dijital ah ee Aprimo
Tags: Adamaprimomaaraynta hantida aprimoASOSmaaraynta hantidaxidheenkamaaraynta hantida dijitaalka ahhantida dijital ahdepot gurigaPhillips
Sida Loogu Kordhiyo Mawduucaaga 'B2B' si aad ugu abuurto hoggaamiyeyaal Shabakad NetLine ah